အေပ်ာ္မယ္ေလးမ်ားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ဘ၀အေၾကာင္းေလးေတြ - APANNPYAY
Home / ဘ၀ႏွင္႔အခ်စ္က႑ / အေပ်ာ္မယ္ေလးမ်ားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ဘ၀အေၾကာင္းေလးေတြ
အေပ်ာ္မယ္ေလးမ်ားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ဘ၀အေၾကာင္းေလးေတြ
Apann Pyay 11:11 PM ဘ၀ႏွင္႔အခ်စ္က႑ Edit
“အစ္ကို သူပဲ။ အားလံုးအဆင္ေျပတဲ့ ေကာင္မေလးပါ။မနက္မိုးလင္း တဲ့အထိ ေနေပးလိမ့္မယ္။ ေၾကးက ေတာ့ အစ္ကိုတို႔ ဘာသာ စကားေျပာၾက။ က်ေနာ္တို႔က ၾကားထဲက ဘာမွ ျဖတ္စားလာဘ္စား မလုပ္ဘူး။ အစ္ကိုတို႔ အဆင္ေျပဖို႔ပဲ လိုတာ” လို႔ကိုအႀကီးေကာင္က ကိုကိုေအာင္ ကို ေျပာရင္း ေကာင္မေလးကိုလည္း “ဟဲ့ျခဴးျခဴး၊ အဆင္ေျပေအာင္ ေနေပးလိုက္ေနာ္။ သူက ေဖာက္သည္ အသစ္၊ ဒီကို တခါမွ လာဖူးတာ မဟုတ္ဘူး” လို႔ လွမ္းေျပာလိုက္တယ္။
ဒီလို ကလပ္ေတြမွာ လုပ္ရတာက အဖမ္းအဆီးအတြက္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္းတယ္၊ စီမံခ်က္ ရွိတယ္ဆိုရင္ ကလပ္က လံုး၀ကို မဖြင့္တာ၊ သူ႔အခ်ိတ္အဆက္နဲ႔ ႀကိဳတင္ သတင္းေပးထားေတာ့ ဒီကိုလာၾကရတဲ့ လိင္ အလုပ္သမေတြ အတြက္က လမ္းေဘးလိင္အလုပ္သမ ေတြထက္ ပိုလံုၿခံဳတယ္ လို႔ သူက ဆက္ေျပာ တယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိင္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိတာေၾကာင့္ တရားမ၀င္အႏွိပ္ခန္းေတြ ၊ အလွျပင္ ဆိုင္ေတြနဲ႔ ကလပ္ေတြ၊ လူစည္ကားရာ ေနရာေတြမွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကတာ ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေပ်ာ္ပါးခ်င္တဲ့ သူတခ်ိဳ႕က ဖုန္းနဲ႔ေခၚလိုက္ရင္ ရတဲ့နည္းလမ္းေတြလည္း ရွိပါ တယ္။
“က်ေနာ္တို႔က အခု အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ေနတဲ့ ေကာင္မေလးတခ်ိဳ႕နဲ႔ ခ်ိတ္ထားတာ။ က်ေနာ့္ဖုန္းကို ဆက္လိုက္ရင္ ေစ်းစကားေျပာၿပီး ဘယ္အရြယ္ေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာျပတယ္။ တကယ္လို႔ ေခၚခ်င္တယ္ ဆိုရင္ က်ေနာ့္ တကၠစီနဲ႔ ဘယ္ဟိုတယ္ ဆိုတာနဲ႔ ေျပာလိုက္ရင္ လာပို႔ေပးတယ္။ ပို႔ေပးတာကို မႀကိဳက္ေသး ဘူးဆိုရင္ ကားခေတာ့ ျပန္ေပးခိုင္းတယ္။ေနာက္တေယာက္ထပ္ေခၚသြားတယ္။က်ေနာ္ က ေခါင္းေတြ လိုေတာ့ ေကာင္မေလးေတြေပၚက ျပန္ျဖတ္ယူတာမ်ိဳး မလုပ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ေလးေတြက က်ေနာ့္ကို အဆင္ ေျပရင္ ေျပသလိုေတာ့ ေပးတာေတြရွိတယ္” လို႔ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနထိုင္တဲ့ အငွား ယာဥ္ ေမာင္း ကိုကိုျမက ဧရာ၀တီကို ေျပာပါတယ္။
“တခါက က်မကို ေဖာက္သည္ တေယာက္က တာေမြပလာဇာက တည္းခိုခန္းကို ေခၚသြားၿပီး အခန္း ထဲ ေရာက္မွ သဘာ၀ မဟုတ္တဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ိဳး လုပ္ခိုင္းတယ္။ က်မက မလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုေတာ့ ရဲတိုင္ မယ္ေလး၊ ဘာေလးနဲ႔ လုပ္ၿပီး တာေမြလမ္းဆံုက ရဲေတြကို မင္းတို႔ ဒီဟာမေတြ ကို မဖမ္းဘူးလား၊ ဘာလား သြားလုပ္တယ္။ က်မတို႔က ရယ္ေတာင္ ရယ္ခ်င္ ေသးတယ္။ က်မတို႔ေနရာက လိင္အလုပ္ သမေတြက ရဲေတြဆီမွာ ျပည့္တန္ဆာ အမႈအတြက္ အလွည့္က် အဖမ္းခံ ေပးေနရတာဆိုေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး” လို႔ မဆင့္ဆင့္က ဆုိတယ္။
“တခ်ိဳ႕က ေဖာက္သည္ေတြလို ေခၚသြားၿပီးမွ နင္ ငါ့ကို စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ လုပ္ေပး၊ ပိုက္ဆံ တျပားမွ ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး၊ တခါတည္း အခ်ဳပ္ထဲ ဖမ္းထည့္လိုက္မွာ” ဆုိတဲ့ အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကား မႈေတြ လည္း ရွိတယ္။ နယ္ဘက္မွာဆို ပိုဆိုးတယ္။ လိင္ ေပ်ာ္ပါးဖို႔ ေခၚသြားတာက တဦးတည္း၊ ေနရာေရာက္မွ လူ ၄၊ ၅ ဦးက ၀ိုင္း အႏိုင္က်င့္တာ။ လိင္အလုပ္သမ ေတြမွ အဲဒီလို မ်ိဳးဆို ဘယ္ကို သြားတိုင္ရမလဲ။ တိုင္တဲ့ အခါေတာင္ ကိုယ္က ျပန္အဖမ္းခံရမွာ။ သူတို႔ဘက္က ရပ္တည္ေပးဖို႔ ဘာမွမရွိဘူး” လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။
ေက်ာက္ေျမာင္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ လိင္အလုပ္သမ မခ်ိဳခ်ိဳကေတာ့ လိင္လုပ္ငန္း အေပၚ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိဘ၀ ရပ္တည္ေရးႏွင့္ မိသားစု အေရး မ်ား ေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ထင္ထင္ေပၚေပၚ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း မိမိ အဆက္အသြယ္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ အဆင္ေျပေၾကာင္း ဧရာ၀တီကို ေျပာပါတယ္။
အႏွိပ္ခန္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူ တခ်ိဳ႕နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ စက္မႈဇုန္ စက္႐ံု အလုပ္ ႐ံုေတြမွာ လစာ မေလာက္ငွတဲ့ အတြက္ အခုလို အႏွိပ္ခန္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ၾကရင္း ေနာက္ဆံုး လိင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းခြင္ကို ေရာက္ရွိလာတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ အခုလို လုပ္ကိုင္ေနၾကတာကို နယ္ဘက္ ေဒသေတြက မိသားစုေတြက မသိၾကေၾကာင္း ေျပာဆို ၾကပါတယ္။
ဧရာဝတီက ေမးျမန္းခဲ့သမွ် အႏွိပ္ခန္း လုပ္ကိုင္ ေနၾကသူေတြဟာ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းက ရရွိတဲ့ေငြ ေၾကးေတြကို မိသားစုဆီ ျပန္ေထာက္ပံ့ ေပးရတာေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းကို မစြန္႔ခြာႏိုင္ၾကသူေတြ ရွိသလို၊ အနည္းစုကေတာ့ အခုလို ေပါေပါမ်ားမ်ား သံုးစြဲ ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းက စြန္႔ခြာလိုျခင္း မရွိတာလို႔ သိရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပံုမွန္က်န္းမားေရး စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေလ့မရွိၾကသလို၊ အႏွိပ္ခန္း တခုမွာလည္း အခ်ိန္ၾကာၾကာ လုပ္ေလ့မရွိဘူးလို႔ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းက အႏွိပ္ခန္းတခုမွာ လိင္ေဖ်ာ္ ေျဖေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ မဆူဆန္က ေျပာျပပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား အသက္ ၁၅ ႏွစ္ကေန ၄၉ ႏွစ္အၾကား အမ်ိဳးသမီးေတြထဲက ၀. ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အခေၾကးေငြကို တိုက္႐ိုက္ယူၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ လိင္အလုပ္သမေတြအျဖစ္ ရွိေနၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ ၄ ေသာင္းကေန ၈ ေသာင္း အၾကား အေရအတြက္ရွိတယ္လို႔ ကုလသမဂၢနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ တို႔ ပူးေပါင္း ေကာက္ခံထားတဲ့ ခန္႔မွန္းေျခ စာရင္းေတြက ဆိုပါတယ္။ အဲဒီလို ေငြေၾကးတိုက္႐ိုက္ ယူတဲ့ လိင္အလုပ္သမေတြထဲမွာ ေကတီဗီ၊ အႏွိပ္ခန္း၊ အလွျပင္ဆိုင္၊ တယ္လီဖုန္း အဆက္အသြယ္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ေန ၾကသူေတြ ပါ၀င္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိေသးဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ အႏွိပ္ခန္းက လိင္အလုပ္သမ ေတြဟာ အႏွိပ္ခန္းတခုကေန ေနာက္တခုကို ေျပာင္းလုပ္မွ က်န္းမာ ေရး စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ရတာ မ်ိဳးေၾကာင့္ အဲဒီလိုေနရာမ်ိဳးေတြကို ကူညီေပးဖုိ႔၊ ပညာေပးဖို႔ေတြ မ်ားစြာ လိုအပ္တယ္လို႔ သူက ဆက္ေျပာတယ္။
“ဆိုင္မန္ေနဂ်ာေတြ၊ ပိုင္ရွင္ေတြက စည္းကမ္းခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ၿပီး ဒီဆိုင္က အႏွိပ္သီးသန္႔ပဲ လုပ္သ လိုလို စီမံထား တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိုလာတဲ့သူတိုင္းက လိင္ေပ်ာ္ပါးဖို႔ ဆိုတာ သူတို႔သိေနၾကတာပဲ။ အလုပ္ သမေတြပဲ ခံရတာ။ အျပင္ေတြ မွာထက္ ပိုလံုၿခံဳလို႔ ဒီမွာ စီးပြားလာရွာတာ ဆိုေတာ့ ဒီလိုေန ရာေတြကို မစြန္႔ခြာႏိုင္ၾကဘူး” လုိ႔ သူက ဆိုပါတယ္။
“တကယ္ေတာ့ လိင္အလုပ္သမေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မိသားစုေတြကို တာ၀န္ယူခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ ကိုယ့္ ဘ၀ကိုယ္ နစ္မြန္း ရင္ နစ္မြန္းပါေစ ဆိုၿပီး သူတို႔က စြန္႔လိုက္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ သူတေယာက္ တည္းပဲ အနာခံလိုက္မယ္၊ သူ႔မိသားစုေတြ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနႏိုင္ရင္ၿပီးေရာ ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီဘ၀ထဲ မွာပဲ လည္ေနေတာ့တာပဲ” လို႔ ေဒၚႏွင္းႏွင္းယုက ေျပာပါတယ္။
တာမွေပလာဇာမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ DJ ကလပ်ရဲ့ အရှေ့ကို ည ၁၂ နာရီ အကျော်မှာ အငှားကား တစီးဆိုက် လာပြီး ကိုကိုအောင် တယောက် ကားပေါ်က ဆင်းလာတယ်။ ကလပ်ရဲ့ အရှေ့မှာရှိနေတဲ့ အငှားကားတွေ ကြားက ကိုအကြီးကောင်ကို ရှာရင်းနဲ့ကောင်မလေးတယောက် ခေါ်ချင် တဲ့အကြောင်း ကိုအကြီးကောင် ကို ပြောလိုက်တယ်။နောက်မကြာဘူး၊ ကလပ်ထဲက အသက် ၂၀ ကျော် ကောင်မလေး တယောက် အပြင် ထွက်လာတယ်။
“အစ်ကို သူပဲ။ အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့ ကောင်မလေးပါ။မနက်မိုးလင်း တဲ့အထိ နေပေးလိမ့်မယ်။ ကြေးက တော့ အစ်ကိုတို့ ဘာသာ စကားပြောကြ။ ကျနော်တို့က ကြားထဲက ဘာမှ ဖြတ်စားလာဘ်စား မလုပ်ဘူး။ အစ်ကိုတို့ အဆင်ပြေဖို့ပဲ လိုတာ” လို့ကိုအကြီးကောင်က ကိုကိုအောင် ကို ပြောရင်း ကောင်မလေးကိုလည်း “ဟဲ့ခြူးခြူး၊ အဆင်ပြေအောင် နေပေးလိုက်နော်။ သူက ဖောက်သည် အသစ်၊ ဒီကို တခါမှ လာဖူးတာ မဟုတ်ဘူး” လို့ လှမ်းပြောလိုက်တယ်။
ခြူးခြူးဆိုတာက မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး ဝင်းနားက ရပ်ကွက်ထဲ မှာ နေတဲ့သူပါ။ သူ့မှာ အိမ် ထောင်ရှိပေမယ့် သူအခုလို လိင်အလုပ်သမ ဘဝ ရောက်နေတာကို သူ့ခင်ပွန်းက လုံးဝ မသိတဲ့အကြောင်း၊ သူက ဒီလုပ်ငန်းက ဝင်တဲ့ ဝင်ငွေကို ဧရာဝတီတိုင်းမှာ နေတဲ့ သူ့မိဘတွေဆီ ပိုက်ဆံ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အကြောင်း ပြောပြတယ်။
သူ ရန်ကုန်ကို စရောက်တော့ လှိုင်သာယာက အထည်ချုပ် စက်ရုံတရုံမှာ အလုပ်စလုပ်ခဲ့တာ ၈ လ ကျော် လာတော့ အဲဒီ စက်ရုံက သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အဆက်သွယ်နဲ့ပဲ အနှိပ်ခန်းတခုမှ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အနှိပ်ခန်းလို့သာ ဆိုတယ်၊ တကယ့် တကယ်မှာတော့ လိင်ဖျော်ဖြေ ပေးရတာပါပဲတဲ့။
ဒီလို ကလပ်တွေမှာ လုပ်ရတာက အဖမ်းအဆီးအတွက် လုံခြုံရေး ကောင်းတယ်၊ စီမံချက် ရှိတယ်ဆိုရင် ကလပ်က လုံးဝကို မဖွင့်တာ၊ သူ့အချိတ်အဆက်နဲ့ ကြိုတင် သတင်းပေးထားတော့ ဒီကိုလာကြရတဲ့ လိင် အလုပ်သမတွေ အတွက်က လမ်းဘေးလိင်အလုပ်သမ တွေထက် ပိုလုံခြုံတယ် လို့ သူက ဆက်ပြော တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိင်လုပ်ငန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိတာကြောင့် တရားမဝင်အနှိပ်ခန်းတွေ ၊ အလှပြင် ဆိုင်တွေနဲ့ ကလပ်တွေ၊ လူစည်ကားရာ နေရာတွေမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ကိုင်နေကြတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပျော်ပါးချင်တဲ့ သူတချို့က ဖုန်းနဲ့ခေါ်လိုက်ရင် ရတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်း ရှိပါ တယ်။
“ကျနော်တို့က အခု အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လုပ်နေတဲ့ ကောင်မလေးတချို့နဲ့ ချိတ်ထားတာ။ ကျနော့်ဖုန်းကို ဆက်လိုက်ရင် စျေးစကားပြောပြီး ဘယ်အရွယ်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ပြောပြတယ်။ တကယ်လို့ ခေါ်ချင်တယ် ဆိုရင် ကျနော့် တက္ကစီနဲ့ ဘယ်ဟိုတယ် ဆိုတာနဲ့ ပြောလိုက်ရင် လာပို့ပေးတယ်။ ပို့ပေးတာကို မကြိုက်သေး ဘူးဆိုရင် ကားခတော့ ပြန်ပေးခိုင်းတယ်။နောက်တယောက်ထပ်ခေါ်သွားတယ်။ကျနော် က ခေါင်းတွေ လိုတော့ ကောင်မလေးတွေပေါ်က ပြန်ဖြတ်ယူတာမျိုး မလုပ်ပါဘူး။ သူတို့လေးတွေက ကျနော့်ကို အဆင် ပြေရင် ပြေသလိုတော့ ပေးတာတွေရှိတယ်” လို့ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ အငှား ယာဉ် မောင်း ကိုကိုမြက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လိင်အလုပ်သမ အတော်များများကတော့ ရဲတွေနဲ့ မပက်သက်ဘဲ နေလို့ မရတဲ့အကြောင်း၊ သူတို့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တာမွေလမ်းဆုံ နေရာမှာ လိုအပ်ရင် အလှည့်ကျ အဖမ်းခံရတာမျိုး အထိ ရှိကြောင်း တာမွေလမ်းဆုံမှာ လိင်အလုပ်သမ အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူ မဆင့်ဆင့်က ဆိုပါတယ်။
သူတို့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ နယ်မြေမှာ ရဲတွေကို အပတ်စဉ် လိုင်းကြေးပေးနေရတဲ့အပြင် တခါတခါ တာမွေလမ်း ဆုံမှာ လှည့်ကင်း လာစောင့်တဲ့ ရဲတွေအတွက် လက်ဖက်ရည် ဖိုးလည်း ရှင်းပေးရတတ်ကြောင်း၊ အဲဒီလို လုပ်မှလည်း အဲဒီနေရာမှာ အေးအေးဆေးဆေး လုပ်စားလို့ရတဲ့အကြောင်း သိရပါတယ်။
“တခါက ကျမကို ဖောက်သည် တယောက်က တာမွေပလာဇာက တည်းခိုခန်းကို ခေါ်သွားပြီး အခန်း ထဲ ရောက်မှ သဘာဝ မဟုတ်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုမျိုး လုပ်ခိုင်းတယ်။ ကျမက မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုတော့ ရဲတိုင် မယ်လေး၊ ဘာလေးနဲ့ လုပ်ပြီး တာမွေလမ်းဆုံက ရဲတွေကို မင်းတို့ ဒီဟာမတွေ ကို မဖမ်းဘူးလား၊ ဘာလား သွားလုပ်တယ်။ ကျမတို့က ရယ်တောင် ရယ်ချင် သေးတယ်။ ကျမတို့နေရာက လိင်အလုပ် သမတွေက ရဲတွေဆီမှာ ပြည့်တန်ဆာ အမှုအတွက် အလှည့်ကျ အဖမ်းခံ ပေးနေရတာဆိုတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး” လို့ မဆင့်ဆင့်က ဆိုတယ်။
အခုလို လိင်အလုပ်သမတွေအပေါ် အကာအကွယ် ပေးမယ့် ဥပဒေတွေ မရှိတာကြောင့် သူတို့အနေနဲ့ ရဲတွေနဲ့ မပတ်သက်လို့ မရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေရတာ၊ ရဲတဦးအတွက် တလကို အမှုဘယ်လောက် ရအောင် ရှာရမယ်ဆိုတဲ့ စီမံချက်တွေ ကြောင့်လည်း အခုလို အလွယ်တကူ ဖမ်းဆီးလို့ရတဲ့ လိင်အလုပ် သမတွေ အပေါ်မှာ အသုံးချနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ လိင်အလုပ်သမ တွေကို ကူ ညီစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်နေ တဲ့ တော်ဝင်ခရေ ကွန်ရက် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်နှင်းနှင်းယုက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နှစ်တိုင်း နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလလို အချိန်မျိုးတွေမှာ လိင်အလုပ်သမတွေကို စီမံချက်နဲ့ အများ အပြား ဖမ်းဆီးတတ် လေ့ရှိကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလည်း လိင်အလုပ်သမတွေ အပေါ် ဥပဒေကို အကြောင်းပြပြီး အနိုင်ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်တတ်လေ့ ရှိကြောင်း သူက ဆက်ပြောပြတယ်။
“တချို့က ဖောက်သည်တွေလို ခေါ်သွားပြီးမှ နင် ငါ့ကို စိတ်ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေး၊ ပိုက်ဆံ တပြားမှ ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး၊ တခါတည်း အချုပ်ထဲ ဖမ်းထည့်လိုက်မှာ” ဆိုတဲ့ အနိုင်ကျင့် စော်ကား မှုတွေ လည်း ရှိတယ်။ နယ်ဘက်မှာဆို ပိုဆိုးတယ်။ လိင် ပျော်ပါးဖို့ ခေါ်သွားတာက တဦးတည်း၊ နေရာရောက်မှ လူ ၄၊ ၅ ဦးက ၀ိုင်း အနိုင်ကျင့်တာ။ လိင်အလုပ်သမ တွေမှ အဲဒီလို မျိုးဆို ဘယ်ကို သွားတိုင်ရမလဲ။ တိုင်တဲ့ အခါတောင် ကိုယ်က ပြန်အဖမ်းခံရမှာ။ သူတို့ဘက်က ရပ်တည်ပေးဖို့ ဘာမှမရှိဘူး” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ကျောက်မြောင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် လိင်အလုပ်သမ မချိုချိုကတော့ လိင်လုပ်ငန်း အပေါ် နှစ်ခြိုက်စွာ လုပ်ကိုင်နေခြင်း မဟုတ်သော်လည်း လက်ရှိဘဝ ရပ်တည်ရေးနှင့် မိသားစု အရေး များ ကြောင့် စွန့်လွှတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ တည်ဆဲ ဥပဒေများကြောင့် ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း မရှိသော်လည်း မိမိ အဆက်အသွယ်နှင့် လုပ်ကိုင်နေခြင်းကြောင့် အဆင်ပြေကြောင်း ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
အရင်က စားသောက်ဆိုင် ကြီးကြီးတခုမှာ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပိုက်ဆံရှိ လူတန်းစားတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရှိခဲ့ တဲ့အတွက် အခုလို ဖုန်းနဲ့ ခေါ်လိုက်တာနဲ့ လိုက်နိုင်တဲ့ အဆင့်အထိ လုပ်ကိုင်နိုင် တာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သူကိုယ်တိုင် တလကို ဝင်ငွေ ၁၀ သိန်းနီးပါးလောက် ရရှိကြောင်း သူက ဆိုတယ်။
ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံ နည်းနည်းပဲရတဲ့ အပြင် ကျန်းမားရေး ရှုထောင့်က ကာကွယ်မှုလည်း အားနည်းနေတဲ့ လိင်လုပ်သမ တွေလည်း အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။
အသက် ၄၀ ကျော် အရွယ်ရောက်မှ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းခွင်ကို ဝင်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေ အများစု က ငွေကြေး ရတာလည်း နည်းသလို အများအားဖြင့် သောက်စား မူးယစ်ထားတဲ့ သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံမှု ပိုများ ရတဲ့အကြောင်း တောင်ဒဂုံ မြို့နယ်မှာ နေတဲ့ ဒေါ်အေးက ပြောပြတယ်။
“မူးလာတဲ့သူ တချို့ဆိုရင် ကွန်ဒုံးမသုံးဘူး။ ကိုယ်က ကြောက်ပေမယ့် အဆင်ပြေအောင် နေလိုက်တာ ပဲ။ ရောဂါဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်တော့၊ မတက်နိုင်ဘူး။ တချို့ဆို ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုမျိုး ကိုတောင် လုပ်ကြတယ်။ ဘယ်တက်နိုင်မလဲ။ ကိုယ့် အသက်အရွယ်နဲ့က ပိုက်ဆံ ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ ဘယ်လိုလုပ် ခေါ် မလဲ” လို့ သူက ဆိုတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းနဲ့ ပက်သက်လို့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်လောက်ကလို အိမ်တွေမှာ လုပ်ကိုင် ကြတာမျိုး မရှိတော့ပေမယ့်၊ အနှိပ်ခန်းလို့ အမည်တွင်ပြီး ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေမှုက များပြား လာခဲ့ပါတယ်။
တချို့ အနှိပ်ခန်းတွေက အနှိပ် သီးသန့်သာ လုပ်ကြပေမယ့် တချို့ကတော့ လိင်ဖျော်ဖြေရေး သက်သက် သာ လုပ်ကိုင်နေကြ တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်တဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေက မကြာခဏ နေရာပြောင်းပြီး လုပ်ငန်းကို အဖမ်း မခံရအောင် ရှောင်တိမ်းလာတာ တွေ့ရတယ်လို့ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်နေတဲ့ အနှိပ်ခန်းကို သွားဖူးတဲ့ ကိုနောင်က ဧရာဝတီကို ပြောပြတယ်။
“အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ကောင်မလေးက နေမှာလား၊ နှိပ်တော့ မနှိပ်တတ်ဘူးနော်လို့ ပြောတယ်။ တခါနေ ရင် ကျပ် ၈ ထောင်နဲ့ ၁ သောင်းလောက် တောင်းတတ်တယ်။ တနာရီ ဆက်ရှင်ကြေးနဲ့ဆို တခါသွားရင် ကျပ် ၁ သောင်းခွဲလောက် ကုန်တယ်။ အဲဒါတောင် တခေါက်ပဲ လိင်ဆက်ဆံလို့ရမှာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ က ကောင်မလေးတွေက ကွန်ဒုံးမပါဘဲနဲ့ လုံးဝမနေဘူး” လို့ သူက ဆိုတယ်။
အနှိပ်ခန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေကြသူ တချို့နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်း ကြည့်တဲ့ အခါမှာ စက်မှုဇုန် စက်ရုံ အလုပ် ရုံတွေမှာ လစာ မလောက်ငှတဲ့ အတွက် အခုလို အနှိပ်ခန်းကို ပြောင်းရွှေ့ လုပ်ကိုင်ကြရင်း နောက်ဆုံး လိင် ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းခွင်ကို ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့ အခုလို လုပ်ကိုင်နေကြတာကို နယ်ဘက် ဒေသတွေက မိသားစုတွေက မသိကြကြောင်း ပြောဆို ကြပါတယ်။
ဧရာဝတီက မေးမြန်းခဲ့သမျှ အနှိပ်ခန်း လုပ်ကိုင် နေကြသူတွေဟာ လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းက ရရှိတဲ့ငွေ ကြေးတွေကို မိသားစုဆီ ပြန်ထောက်ပံ့ ပေးရတာကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းကို မစွန့်ခွာနိုင်ကြသူတွေ ရှိသလို၊ အနည်းစုကတော့ အခုလို ပေါပေါများများ သုံးစွဲ နိုင်တာကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းက စွန့်ခွာလိုခြင်း မရှိတာလို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့တော်တော်များများက ပုံမှန်ကျန်းမားရေး စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်လေ့မရှိကြသလို၊ အနှိပ်ခန်း တခုမှာလည်း အချိန်ကြာကြာ လုပ်လေ့မရှိဘူးလို့ တာမွေမြို့နယ် အတွင်းက အနှိပ်ခန်းတခုမှာ လိင်ဖျော် ဖြေရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မဆူဆန်က ပြောပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး တရားဝင်လိုင်စင်နဲ့ ခွင့်ပြုသင့် မပြုသင့် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးဖို့ တင်ပြခဲ့ပေမယ့် ဆွေးနွေးခွင့်တောင် မရခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလို တရားဝင် ရပ်တည်ခွင့် မရှိတာကြောင့်ဘဲ လိင်အလုပ်သမတွေဟာ ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်ကို မရဘဲ နေရာစုံမှာ ဖိနှိပ်မှုနဲ့ ကြုံတွေ့နေရသလို၊ ရောဂါ ကူးစက် ပြန့်ပွားမှုနဲ့ အမှုအခင်း များစွာလည်း ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသား အသက် ၁၅ နှစ်ကနေ ၄၉ နှစ်အကြား အမျိုးသမီးတွေထဲက ၀. ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အခကြေးငွေကို တိုက်ရိုက်ယူပြီး လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ လိင်အလုပ်သမတွေအဖြစ် ရှိနေပြီး ခန့်မှန်းခြေ ၄ သောင်းကနေ ၈ သောင်း အကြား အရေအတွက်ရှိတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ တို့ ပူးပေါင်း ကောက်ခံထားတဲ့ ခန့်မှန်းခြေ စာရင်းတွေက ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလို ငွေကြေးတိုက်ရိုက် ယူတဲ့ လိင်အလုပ်သမတွေထဲမှာ ကေတီဗီ၊ အနှိပ်ခန်း၊ အလှပြင်ဆိုင်၊ တယ်လီဖုန်း အဆက်အသွယ်နဲ့ လုပ်ကိုင်နေ ကြသူတွေ ပါဝင်နိုင်ဖွယ် မရှိသေးဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
အနှိပ်ခန်းလို နေရာတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ သူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်အားငယ်မှုတွေ ရှိနေတတ် တာ၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင် တွေရဲ့ စီမံမှုတွေကြောင့် မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို လုပ်လို့မရတဲ့ အနေအ ထားတွေ ရှိနေတာ တွေ့ရတယ်လို့ တော်ဝင်ခရေ ကွန်ရက် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်နှင်းနှင်းယုက ပြောပါတယ်။
တချို့ အနှိပ်ခန်းက လိင်အလုပ်သမ တွေဟာ အနှိပ်ခန်းတခုကနေ နောက်တခုကို ပြောင်းလုပ်မှ ကျန်းမာ ရေး စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ရတာ မျိုးကြောင့် အဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေကို ကူညီပေးဖို့၊ ပညာပေးဖို့တွေ များစွာ လိုအပ်တယ်လို့ သူက ဆက်ပြောတယ်။
“ဆိုင်မန်နေဂျာတွေ၊ ပိုင်ရှင်တွေက စည်းကမ်းချက်တွေ အမျိုးမျိုးထုတ်ပြီး ဒီဆိုင်က အနှိပ်သီးသန့်ပဲ လုပ်သ လိုလို စီမံထား တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိုလာတဲ့သူတိုင်းက လိင်ပျော်ပါးဖို့ ဆိုတာ သူတို့သိနေကြတာပဲ။ အလုပ် သမတွေပဲ ခံရတာ။ အပြင်တွေ မှာထက် ပိုလုံခြုံလို့ ဒီမှာ စီးပွားလာရှာတာ ဆိုတော့ ဒီလိုနေ ရာတွေကို မစွန့်ခွာနိုင်ကြဘူး” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
လိင်အလုပ်သမ တွေဟာ အများသောအားဖြင့် မိသားစုတွေကို ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုနေရတဲ့သူတွေ အများ စုဖြစ်တာကို တွေ့ရ သလို တာဝန်ယူချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ အနစ်နာခံချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ အများစု ရှိကြ တယ်လို့ သူက ဆက်ပြောတယ်။
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတာကို သိသွားမယ်ဆိုရင် အဲဒီလူအပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်က နှိမ့်ချ ဆက်ဆံကြမှာကို စိုးရိမ်နေကြရတဲ့ အတွက် လိင်အလုပ်သမတွေရဲ့ ပင်ကိုယ် စိတ်ဓာတ်ထဲမှာပါ စိတ်ဝေဒနာ ဖြစ်နေတာ မျိုးတွေလည်း ရှိတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
“တကယ်တော့ လိင်အလုပ်သမတွေ တော်တော်များများက မိသားစုတွေကို တာဝန်ယူချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့် ဘဝကိုယ် နစ်မွန်း ရင် နစ်မွန်းပါစေ ဆိုပြီး သူတို့က စွန့်လိုက်ကြတာ များပါတယ်။ သူတယောက် တည်းပဲ အနာခံလိုက်မယ်၊ သူ့မိသားစုတွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေနိုင်ရင်ပြီးရော ဆိုပြီးတော့ ဒီဘဝထဲ မှာပဲ လည်နေတော့တာပဲ” လို့ ဒေါ်နှင်းနှင်းယုက ပြောပါတယ်။